I-Android 5.1.1 isebenza kwinqaku le-galaxy 4 kwiibhenkmark; inokulungiswa kancinci ngama-64
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Android 5.1.1 isebenza kwiGalaxy Note 4 kwiibhenkmarks; inokulungiswa kancinci ngama-64
I-Android 5.1.1 isebenza kwiGalaxy Note 4 kwiibhenkmarks; inokulungiswa kancinci ngama-64
I-Samsung Galaxy Note 4 isemgceni wohlaziyo lwe-Android 5.1.1, ngokwengxelo ngalo mbandela. I-phablet, eya kuthi yenzele indlela Galaxy Note 5 kwisithuba seenyanga ezimbalwa, uthathe into ebonakala ngathi ineminyaka ukufumana i-Android 5.0 Lollipop, kodwa ngokwe SamMobile, ukuvavanywa kwe-Android 5.1.1 ngoku kuyaqhubeka.
Ibhlog egxile kwi-Samsung ifumene iibhentshi ze-AnTuTu ezibonisa i-Android 5.1.1 isebenza kwiGalaxy Note 4. Ngokucacileyo, i-Samsung isenokuvavanya i-64-bit yokwakha kwiNqaku 4, nangona oku kucingelwa ukuba kuyinto ethembisayo ukuthelekelela kunokuba kunokwenzeka okokugqibela.
Nokuba i-Galaxy S6 okanye i-S6 Edge ayikafumani i-Android 5.1.1, kwaye ujonge indlela ezibaluleke ngayo ezi zinto ziphathwayo kwi-Samsung, ukulinda rhoqo uhlaziyo kubonakala kunzima. Kuba abanini be-S6 duo basahleli ezandleni zabo ngokulindela i-OTA, kunokwenzeka ukuba i-Galaxy Note 4 ayizukubona i-Android 5.1.1 kude kube lixesha elithile emva koko, elinokuba ziiveki okanye iinyanga kude.
I-AnTuTu ibonisa i-Android 5.1.1 kwiNqaku 4
Ukukhumbula ukuba kuthathe ixesha elingakanani ukuba i-Android 5.0 ivele kwiNqaku 4, asizukufumana ithemba lethu kakhulu ngoku, ngakumbi kuba 'ukulibaziseka okungalindelekanga' kunye neqonga le-Android libonakala lihamba ngesandla. Kodwa ubuncinci inqanaba lovavanyo libonakala ngathi liqalile, kwaye njengoko kwaye xa sisiva okungakumbi, siza kuligubungela aphaIfowuni uArena.
Ufunda njani ifayile kwiJava
IMotorola iyaqala kwakhona ukukhutshwa kwe-Android 7.0 Nougat yeMoto X yoHlelo oluSulungekileyo e-US
IGoogle Nexus 6P vs Samsung Galaxy Qaphela 5
I-Skype ye-Android ngoku iyakwazi ukuhambisa iifowuni zakho zevidiyo ngaphezu kwezinye iifayile
UGoogle uzisusile eziapps kwiVenkile yokudlala, ngoku kuya kufuneka uzicime kwifowuni yakho